Deep Noloshiisa Aarohi Ayuu Ka Jecelyahay Banaanka Ayuu Iskeenay, Netra Oo Arkeyso Deep Iyo Aarohi Oo Shumiska Bishimaha Wadaagayaan, Netra Waa Askariyad Iyo Warar Kale Oo Cusub!! – Filimside.net
Deep Noloshiisa Aarohi Ayuu Ka Jecelyahay Banaanka Ayuu Iskeenay, Netra Oo Arkeyso Deep Iyo Aarohi Oo Shumiska Bishimaha Wadaagayaan, Netra Waa Askariyad Iyo Warar Kale Oo Cusub!!
April 13, 2019 Ali Aadan
Fiidnimo wanaagsan saaxiibada Filimside inta la socota musalsalka Ishq Mein Marjawan waxaan idiin heynaa warar Update ah ama cusub oo ku saabsan musalsalkaan balse dadka la socdaan kaliya ayuu anfacaa.
Ugu horeyn Deep Raj Singh aad iyo aad ayuu u jecel yahay Aarohi dadka af soomaaliga ku daawadan maalmo kadib ayee ogaan doonaan arinkaan Deep isagoo soo jeedo oo fadhiya ayuu ku riyoona Aarohi oo akjoogta misane waqti la qaadaneysa balse waa mid isdiidsiinayo jaceylka Aarohi hadafkiisana ku dadaala.
Dhanka kale Aarohi dhankeeda Deep ayee ku riyoone iyo isagoo waqti jaceyl ah la qaadanaayo, Deep luulkiisa waa laga dhacaa lamana oga haweeneyda ka qaadaneyso inkastoo uu isaga kaga shakinaayo Tara, Netra iyo Aarohi midkood in luulkiisa iyo dheymankiisa ka qaateen.
Deep si wanaagsan ayuu ula socdaa in Netra qorsho weyn leedahay Netra wajigeeda rasmiga ah lama oga balse waxaa looga shakisan yahay inee askariyad tahay taaso dooneysa in Deep ay ka hor istaagto seefta dahabka uu dhowaan dhici rabo mida kale waa gabar aan caadi aheyn awood gaar ahna leh tababar nooc walbana leh.
Aarohi ayaa daba galeysa soona ogaaneysa in Netra dadka sidee u maleyaan mooyee ay sikale tahay ugu dambeyn Netra waxay indhaheeda ku arkee Deep oo shumiska bishimaha la wadaagayo Aarohi balse hab jaceyl ma aha waxuu doonayey inuu neef siiyo oo uu iyada bad baadiyo maadama nolosheeda qatar galeyso.
Netra waxay noqotay mid ka awood badan Tara waxayna la bar bardhigeysaa Deep inkastoo Aarohi dabagal ku heyso Netra suaalaha la is weydiinaayo waxay tahay waa tuma Netra oo magac ahan hader la baxday “Madhu” maxay damacsantahay.
Deep hadafkiisa qarsoon maxuu yahay, halkuu ka baxay Virat ninka la shaqeeyo Aaroho amuu isaga yahaym, Aarohi Deep inee disho ayee rabtay balse ma dili karto taas bilcagsigeeda maku guuleysan doontaa inee soo saarto sirta Deep iyo Netra.
Tara waxay noqotay qof la isaga ciyaaro Netra, Aarohi iyo Deep ayaa maskax ahaan sidee doonaan ka yeelanayaan iyadana maxaa qorshe u qarsoon halmar miyee is bedeli doontaa halkee ka baxday maamadii dhashay Abhimanyu kaaso xil hore la dilay.
Suaalahan iyo kuwa kale ayee daawadayaasha is weydiinayaan aan sugno wixii soo kordha..
Waxaa Aqrisay 1,338